It is me. Ko Niknayman.: ဂျီမေးလ်လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး အထူးသတိပေးချက်။
ဒီလိုစာမျိုး gmail box ထဲရောက်လာလျှင် လုံးဝ (လုံးဝ) အချက်အလက်တွေ ဖြည့်မပေးပါရန် သတိပေး ချင်ပါတယ်။ မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မျှ မိမိ၏ mail password ကို ဘယ်သူ့ကိုမှ ပေးရန် မလိုပါခင်ဗျာ။ မိမိရဲ့ဂျီမေးလ်ကို ခိုးဝင်ရန် မေးထားခြင်းများသာ ဖြစ်ပါသည်။
Try the New Gmail Beta Mail By Google it's FREE!
You Must Be A Part Of It To Avoid Your Gmail Account To Be Closed. With the New Gmail Beta you MUST Fill the Information's Below To Verify Your Account. This For Your Benefit Read Below To Understand More.
Dear Gmail Account User
Due to the congestion in all Gmail users and removal of all unused Old Accounts, Gmail would be shutting down all unused Accounts, You will have to confirm your E-mail by filling out your Login Info below after clicking the reply button, or your account will be suspended within 24 hours for security reasons.
* Email : ......................................................
* Password : ......................................................
* Date of Birth: ......................................................
* Country Or Territory :......................................................
Account owner that refuses to update his or her account before two weeks of receiving this warning will lose his or her account permanently.
Posted by Ko Niknayman at 3:46 PM
ရွှေဝါရောင်အင်အားများ စုစည်းရေးကော်မီတီ၏ ကြေညာချ...
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဌေးကြွယ်၏ မိခ...
ဂျီအက်စ်အမ် လက်ကိုင်ဖုန်းကိုင်သူများ သတိထားကြပါ။
နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ကျင်းပမည်။...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကို ဂျပန်ရောက...
မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကားပိုင်ရှင်များလည်း ...
အာဏာရှင်အားဆန့် ကျင်ဆဲ၊ ပြည်သူလူထုအား မြတ်နိုးဆဲဖြ...
သီတဂူဆရာတော်ကြီးရဲ့လိပ်ကလေးလိုနေ တရားတော်အား နာ...
စင်ကာပူမှ မျိုးချစ်မြန်မာများ၊ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုမ...
ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ ၀င်းမြင့်တို့ ရယ်။
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော မြန်မာ့အရေးဆွေးနေ...
ဆရာတော်ကြီးများ လုံခြုံရေးအတွက် ပြည်သူများမှ ၀ိုင်...
ဂျီးမေးလ်ထဲသို့မလိုလားသော မေးလ်များပို့ လာသူအား...
တန်ဆောင်မုန်း လပြည့် သာမညဖလ အခါတော်နေ့ သစ္စာပြု ဆုေ...
နိုဝင်ဘာ (၂၀) ရက်နေ့ က စင်ကာပူတွင် အာဆီယံအား ဆန္ဒပြ...
စင်ကာပူမှာ အာဆီယံနိုင်ငံများအား တိုက်တွန်းချက်။
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ နအဖသံရုံးနှင့် စင်ကာပူသံရုံးရှေ...
မြရိပ်ညိုတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အဖြစ်အပျက်။
၈၈မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားများမှ asean ခေါင်းဆောင်မျာ...
လက်အုပ်ချီပြီးရှိခိုးဖို့ မပြောနဲ့လက်အုပ်ချီတဲ့...
“ဧကရာဇ်မင်းကြီးရဲ့ ဘ၀နိဂုံး” တရားတော်အား download...
လိမ်တယ် ညာတယ် လူညာကြီးရယ် ယုံအောင် ဖြီးတတ်တယ်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်။ (နိုဝင်ဘာလ ၁၆...
သာသနာ့ ဥသျှောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာရဟန်းတော်မျ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ်၏ ကြေညာချက်။ (နိုဝင...
ဒီလိုဖမ်းပြီး၊ ဒီလိုနှိပ်စက်မှုက ကွာခြားတယ်။
ဆရာတော် အရှင်ဦးကောဝိဒ ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ “အဆိုးဆ...
ကြောက်ရွံ့ ခြင်းမှ ကင်းဝေးကြပါစေ။
ဖမ်းဆီးခံထားရသော ဆရာတော် အရှင်ဂန္ဘီရနှင့် ရဟန်းတော်...
နအဖအလံကြီးဇောက်ထိုးဆွဲထား။ နအဖ ပြုတ်ကျရန် နီးနေပြီ...
ကိုယ်ရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ကိုယ်ရှိတဲ့နေရာ၊ ကိုယ် ဘယ်...
ကွာတာလေကြောင်းလိုင်းက မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်တွေကို မပြေ...
တရုတ်အာဏာရှင်အစိုးရရဲ့အိုလံပစ်ကို ဘာကြောင့် သပိတ...
သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောကြားတော်မူတဲ့ လူမိုက်တို ...
ကြေးမုံဆိုတာ ကြည့်မှန် (Mirror)။ ကြည့်မှန်ဆိုတာ ကြ...
နအဖသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပီနန်ဆရာတော်ကြီးဆီပေးပို့ ...
အာဏာရှင်အားတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သော အာဇာနည်တစ်ဦး ဦးမောင...
တို့ မေတ္တာစွမ်း ကမ္ဘာလွှမ်း အေးချမ်းကြပါစေ။ လူအချင...
သြော် - မလွတ်လပ်မှုများ၊ ဘုရားဖူးတာတောင် မှတ်ပုံတင...
နအဖထုတ် ငွေကျပ်စက္ကူများပေါ်တွင် “Killer Than Shwe” ...
တေဇရဲ့ပုဂံအဲယားလေကြောင်းလိုင်း(၃) နှစ်ပြည့်နှစ်ပ...
အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ ရင်သွေးတွေကျမယ့်...
နတ်သမီးနဲ့ မိစ္ဆာများ။ (The angel and the devil)
သာသနာ့ဥသျှောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာရဟန်းတော်မျာ...
အမိမြန်မာပြည်ကို ကယ်တင်ပါ၊ လွတ်လပ်မှုအတွက် တိုက်ပွ...
အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် အဆုံအမသြ၀ါဒခံယူပွဲ။
ကျောင်းသားငယ်လေးတွေ ရဲရင့်တဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ သတ္တိ။
မြန်မာပြည် အင်တာနက် ပိတ်ဆို့ မှုနှင့် ပတ်သက်သော သု...
What Burma 's Junta Must Fear In August, the Burm...
“ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ် ဂမ်ဘာရီထံကို နအဖကပေးတဲ့ စာတေ...
ဂျာမဏီနိုင်ငံနှင့် သြစတြေလျနိုင်ငံ (ပါ့သ်မြို့ ) ...
နအဖရဲ့Myanmar.com အကြောင်း။
ပခုက္ကူသံဃာတော်များအား အထူးလေးစားဂုဏ်ပြုကြောင်းေ...
သူက သန်းရွှေမြေး တေဇသား၊ ကျွန်တော်က ကလေးစစ်သား။
မကဒတ (ကျောင်းသားတပ်မတော်) ဖွဲ့ စည်းတည်ထောင်သည့် (၁...